Olee Ebe M Chọta Left akpa ọnọdụ Na France? | Save A Train
Home > Travel Europe > Olee Ebe M Chọta Left akpa ọnọdụ Na France?
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 31/07/2020)
France bụ n'ụlọ ka ọtụtụ puku nke na-adọrọ. Si iconic eiffel tower na Paris na pebbled osimiri nke Nice, mba nke-adịghị agwụ agwụ ihe na-eme. Ma ihe ma ọ bụrụ na ị na-na ịga na a akwụsị, ma ọ bụ na ị na-ama-enyocha gị hotel na ụgbọ oloko gị adịghị ahapụ ọtụtụ awa? Kama ịdị na-ekupụsị akpa gị nile dị iche iche n'obodo, chọta onwe gị a ekpe akpa ebe gburugburu France ịhapụ akpa gị na-enwe yoUa ụbọchị ibu-free.
Dị ka anyị kwuru, obodo jupụtara ebe ịhapụ akpa gị, ezie figuring nke bụ ihe kasị mma n'ihi na ị na-adabere na ọnọdụ gị.
Ọ bụrụ na ị na-eleta a obodo na a akwụsị, ị nwetara ọtụtụ nhọrọ na-echekwa gị bags. Paris nwere isi ihe abụọ na ọdụ ụgbọelu, Charles De Gaulle (CDG) na Paris Orly (ORY), na ma na-enye akpa nchekwa n'ime ọnụ. Kasị isi ụgbọ elu ofufe n'ime Charles De Gaulle, karịsịa maka transatlantic flights, mgbe ala mmefu ego ụgbọ elu-agbasaghị ofufe n'ime Paris Orly. N'agbanyeghị nke gị ọdụ, i nwere ike bulie akpa gị mgbe gị na ụgbọ elu na dobe ha na ntukwasi-obi n'iru n'isi n'ime obodo.
Na Charles de Gaulle, ị pụrụ ịchọta igbe nso ụgbọ okporo ígwè, nke na-eme ya karịsịa. Nchekwa dị site 06:00 ka 21:30, otú ijide n'aka na-abịa azụ n'ihu ebe closes.
Paris Orly nwere ọnọdụ yiri, na ekpe akpa nhọrọ dị nso ọdụ ụgbọ okporo ígwè. Ahịa iche iche dabere ọtụtụ ihe, tinyere iberibe ekpe na size, ezie na ọ bụ ihe ezi uche n'ozuzu. Awa bụ otu dị ka CDG, si 06:00 ka 21:30, ka ọ gwụla ma ị na-na-achọ ịhapụ gị ibu n'otu ntabi anya hụ na ị na-abata na oge.
Ọzọ ọdụ ụgbọelu n'ime France rụọ ọrụ ahụ n'otu ụzọ ahụ, na ibu nhọrọ dị na kasị ọdụ ụgbọelu, na nsonye Nice, Lyon, na Marseille. Lelee na mpaghara gị ọdụ maka nchekwa nhọrọ na ahịa.
Left akpa ọnọdụ Mgbe Train Stations
Stations Na Paris
Ọ bụrụ na ị na-kama transiting site a ụgbọ okporo ígwè, ị na-n'ihu na a plethora nke nhọrọ. n'ime Paris, Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare de Lyon, Gare Montparnasse, na Gare de Marne la Vallee Chessy niile enye ekpe akpa nhọrọ, ọtụtụ dị iche iche na ụlọ ọrụ ndị mpi na-enye ha ọrụ.
Ahịa maka ọrụ ndị a iche iche, na a ewepụghị-ọnụego ego maka mbụ 24 awa, na a kacha nchekwa oge nke 72 awa. Ahịa ndị dị ka ndị: small locker €5.50; ajụ mkpuchi € 7.50; nnukwu mkpuchi € 9,50. Onye ọ bụla ọzọ 24 hour oge € 5.
Awa na ebe nwekwara iche iche dị ka ebe:
Maka mbata si East: Gare de l'Est Ọkwa -1 Hall Central opposite toilets from 06:00 ka 23:45 kwa ụbọchị
Maka mbata si South: Gare de Lyon Hall 3, wepuÚ maka ruu de Bercy 06:15 ka 22:00 kwa ụbọchị
Emi odude ke ekpe ụlọ akụ: Gare Montparnasse Ọkwa otu 07:00 ka 23:00 kwa ụbọchị
The kasị ibu Paris: Gare du Nord Ọkwa -1, esote ụgbọ ala a na-ebiri, na taxi ụzọ ọpụpụ si 06:15 ka 23:15 kwa ụbọchị
Ndị isiokwu na Disneyland: Station Marne la Vallee Chessy: Ọkwa 1 - 07:00 ka 23:00 kwa ụbọchị
Stations N'ime France
Kemgbe ọzọ nke mba, ọtụtụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-enye ekpe ibu na a ga-adaba adaba na usoro iji chekwaa gị ibu. Nke a bụ karịsịa mma maka njem na a Eurail njem, onye na-ahọrọ n'otu ntabi anya na ụgbọ okporo ígwè agafe kama hotels. Lelee obodo Ndepụta gị ụgbọ okporo ígwè iji chọpụta ihe ibu nhọrọ ha na-enye. Dị ka mba bụ ihe magburu onwe nhọrọ maka okporo ígwè njem, na narị ụzọ gasị ejikọta niile isi obodo na obodo nta, you can find left luggage locations all over France.
Ahịa bụ n'ozuzu ezi uche na awa maka ibu nwere ike ịdị iche iche site 24 hour ohere n'oge closures. N'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-ewetara onye magburu onwe nhọrọ maka njem, dị ka njem site na ụgbọ okporo ígwè na-achọ nnọọ ole na ole mgbochi karịa ụgbọ elu. I nwere ike na-abata mere nkeji tupu ụgbọ okporo ígwè napu apu (kama awa, amasị na ọdụ), na jidere akpa gị tupu hopping na ụgbọ oloko gị, ikwe gị jirichaa oge gị na obodo.
Left akpa ọnọdụ Around The City
Ọ bụrụ na ị na-ama na-abịa eleta a obodo a ụbọchị ole na ole na-nnọọ na-now apụ, ị nwere ike ịbụ na chi. Ọtụtụ European hotels na-enye free ibu nchekwa ma ọ bụrụ na ị na-a guest, na i nwere ike ịlaghachi n'oge ọ bụla iji weghachite akpa gị. Otu bụ eziokwu nke ndị ọzọ homestay nhọrọ, dị ka Airbnb. Jụọ gị kpọrọ ma ọ bụrụ na ha dị njikere jide gị na akpa mgbe ị na inyocha obodo.
Ma ọ bụghị ya, ọtụtụ n'obodo ukwu na-enye ekpe akpa nhọrọ gburugburu obodo, karịsịa nso nnukwu njem nleta na-adọrọ mmasị. E nwere ụfọdụ ndị onwe ha ọrụ, kamakwa ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ dị ofụri ukwuu nke France.
Stasher: Stasher bụ a ibu ọrụ na-ejikọ ndị njem na ụlọ ahịa na hotels àjà nchekwa ọrụ. Na ọ bụ dị ka ọtụtụ isi French obodo na-enye ohere online ntinye akwụkwọ, na-eme ka ya nnọọ adaba. Ya website dịkwa nnọọ ọtọ na-egosi ebe awa, ahịa, na reviews nke ọ bụla ebe nke mere na njem nwere ike ịtụkwasị obi ha ibu ga-echekwara n'enweghị.
ः Olibg: Holibag bụ ihe ọzọ na nnukwu ụlọ ọrụ dị nile France. Yiri Stasher, saịtị ejikọ ahịa na ulo oru dị ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ, hotels, na ụlọ ahịa na-enye akpa nchekwa. Na narị dị iche iche nhọrọ, na ị na-fọrọ nke nta na-ekwe nkwa iji chọta a ntụpọ ka dobe gị bags, otú i nwere ike na-enwe ụbọchị gị.
Nannybag: Ọ bụrụ na ị na-anọ na Paris, gị mma nzọ bụ Nannybag. The kasị nchekwa ọrụ ke obodo, Nanny akpa na-enye ọtụtụ narị ebe na 24 hour ohere maka ihe ndị extra abalị. Ahịa bụ a ewepụghị € 6 kwa akpa maka ụbọchị nke mbụ na € 4 ebede. Otu n'ime ihe ndị kacha mma ihe banyere Nannybag bụ na ọ na-emesi obi nchekwa nke gị akpa na ya mkpuchi, nke pụtara na ị nwere ngụkọta udo nke uche.
E nwere ọtụtụ ihe ị ga-achọ ịhapụ gị akpa n'enweghị echekwara, ma ị na-eleta a obodo na a ụbọchị njem ma ọ bụ Ịnwetacha uru ịrụ gị oge tupu ihe -eji ụgbọ okporo. Ọdụ bụ ihe magburu onwe nhọrọ maka layovers, mgbe n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-enye ụfọdụ ndị kasị mma nhọrọ gburugburu mba. Ma ọ bụghị ya, onwe ọrụ ejikọta njem na ulo oru na-eme ka idobe akpa gị adaba na mfe. N'agbanyeghị nke ọ, Jide n'aka na-eme gị rụọ n'ụlọ na dị nhọrọ, ahịa, na nchekwa awa nke mere na i nwere ike ịhụ ndị kasị mma ekpe akpa ebe ke France n'ihi na ị.
Hụrụ anyị isiokwu “Olee Ebe M Chọta Left akpa ọnọdụ Na France?” na-enye aka? Book na Save A Train ị French gbaa ụgbọ okporo ígwè na-amalite gị njem!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Olee Ebe M Chọta Left akpa ọnọdụ Na France?” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cafes-europe%2F የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
akpa leftluggage storebags akpati ozu Train Travel travelfrance travelfree travelparis